Inona no tokony hojerentsika amin'ny fanatanjahan-tena?
Inona no tokony hodinihintsika amin'ny fanatanjahan-tena?
Fotoana: 2019-11-12 Hits: 248
Alohan'ny hanombohan'ny fampihetseham-batana dia mila manao fizahana ara-batana feno izy ireo. Ny votoatin'ny fanadinana dia misy: ny tosidra, ny lipidan'ny rà, ny hemôglôbininà glycosylated, ny fiasan'ny aretim-po, ny fiasan'ny hozatra, ny fiasan'ny voa, ny fahasalaman'ny fundus ary ny tongotra sns. Ny dokotera dia handamina fitsaboana ara-batana araka ny antonony ny toe-batanao.
Misotroa rano ara-potoana. Rehefa maharitra 1 ora ny fotoana anazaran-tena dia tokony hihaino rano fisotro izy. Aleo misotro kely im-betsaka. Raha maharitra adiny 1 ny ora andrasana dia aleo misotro mialoha mba hisorohana ny voka-dratsy amin'ny vatan'olombelona aorian'ny tsy fahampiana rano. Raha manao fanatanjahan-tena mihoatra ny adiny 2 dia tokony handinika ny fitarihana ny sakafo fanampiny.
Manaova akanjo, kiraro ary ba kiraro mety. Tokony hanao akanjo mifoka rivotra izy ireo amin'ny ririnina, izay manampy ny vatana hanemboka sy hisorohana ny sery. Rehefa mangatsiaka loatra ny andro dia tsy asaina manao fanatanjahan-tena any ivelany. Manaova kiraro isan-karazany hanaovana fanatanjahan-tena samy hafa, toy ny fanaovana kiraro fandihizana rehefa mandihy, manao kiraro mihazakazaka rehefa mihazakazaka, manao kiraro an-tongotra rehefa mitaingina tendrombohitra, sns. Rehefa tsy mifanaraka na tsy mahazo aina ny kiraro dia tsy maintsy soloina haingana. Ny kiraro kiraro dia tokony safidiana loko maivana (fotsy) ary manana hatsembohana tsara. Aorian'ny fampihetseham-batana dia zahao ny tongotrao raha toa ka misy loko mena, fivontosana, hafanana ary fanaintainana. raha izany dia tokony hiatrika azy ireo ara-potoana.
Tokony hohamafisin'izy ireo ny fanaraha-maso glucose amin'ny glucose alohan'ny sy aorian'ny fampihetseham-batana. Rehefa manao fanatanjahan-tena tafahoatra na fanaovana fanatanjahan-tena mahery vaika ny marary dia tokony hanitsy vonjimaika ny fandaharana momba ny fitsaboana sy ny fitsaboana zava-mahadomelina, mba hialana amin'ny hypoglycemia.
Mitandrema amin'ny hypoglycemia. Mandritra ny fampihetseham-batana dia handevona ny glucose ao amin'ny vatana ny hozatra. Mandritra izany fotoana izany, hihatsara ny fahatsapana insuline. Ny andraikitra roa dia hitarika amin'ny fampihenana ny glucose amin'ny ra aorian'ny fampihetseham-batana. Ny hypoglycemia dia mety hitranga ao anatin'ny 2 ~ 12 ora aorian'ny hetsika, na dia ao anatin'ny 24 ora aza. Arakaraky ny habetsaky ny hamafin'ny fanatanjahan-tena no aharetan'ny halavan'ny fotoana; Arakaraky ny habetsaky ny hypoglycemia, ny
lava kokoa ny faharetany.
Rahoviana no manomboka manao fanatanjahan-tena ary mandra-pahoviana. Amporisihinay ny diabeta tokony hanao fanatanjahan-tena aorian'ny sakafo 1 ora ary hisorohana ny vokatry ny zava-mahadomelina. Raha te hanao fanatanjahan-tena ianao dia mila mampihena ny fatran'ny fanafody. Ny faharetan'ny fanatanjahan-tena dia tokony haharitra 30 minitra farafahakeliny farafahakeliny ny fanatanjahan-tena aerobika, mahatratra 150 minitra isan-kerinandro farafahakeliny ny fotoana fanaovana fanatanjahan-tena. Ny fampiofanana matanjaka dia maharitra 10 ~ 15 minitra isaky ny mandeha, fara fahakeliny, in-3 isan-kerinandro; Ny fampihetseham-batana dia tokony haharitra 5 ～ 10 minitra isaky ny mandeha.
Pejy mialoha: Antony folo mahazatra indrindra amin'ny fiovan'ny haavon'ny glukose ao anaty
Pejy manaraka: Inona no hanina raha mijaly hypoglycemia?